Hevitra MPANOHARIANA | 7
2017-09-12 @ 21:06 in Andavanandro
Andro maromaro lasa izay, voaendaka atoandrobenanahary ny zana-drahalahiko nanao vakansy tao 67ha, tanàna nahalehibe. Teo amin'ny Parking akaikin'ny CEG 67ha no nisian'izany. Olona iray manana fiara izay efa voaendaka teo amin'io toerana io ihany koa no nitondra azy tao amin'ny "chef quartier" ary ireo no nitondra azy tao an-trano hilaza fa voaendaka ilay zalahy. Efa maromaro ny olona nitaraina fa voaendaka teo amin'io faritra voalaza io nefa sady ao afovoan'ny fokontany 67ha avaratra andrefana izy io no misy mpiambina maromaro izay milaza ho samy manana ny faritra ambenany, io parking io.
Faritra tsy azo andehanana alina intsony ilay tanàna nahabe. Tsy mivondrona intsony ihany koa ny olona fa samy mizaka mangina izay mahazo azy ireo. Tantara sisa ilay firaisankina tao anaty savorovoron'ny taona 2009, fotoana nampivaralila tanteraka ilay firaisankina. Efa nisy ny fivoriana handraisana fepetra amin'io tsi-fandriampahalemana io saingy tsy nahare ny tohiny aho. Mitovy daholo ny andehanan'ny ahiahin'izay anontaniana fa tsy mandeha irery ireo. Lasa mitovy ihany koa ny tenenin'ny olona rehefa misy ny voaendaka... izy koa dia efa voaendaka tao an-tanàna ihany, ary efa fantatra ny tohin'ny raharaha rehefa amin'ny tranga tahaka ireny fa dia mivalona any avy hatrany ireny. Ny tsoa-kevitra iraisan'ny rehetra dia hoe afoizo any izay azony fa raha mitaky ny hanarahana ny finday iray manana IMEI ianao dia volabe tokony hahavidy finday hafa koa no takiana aminao ka anjaranao ny misafidy. Ny mpitandro ny filaminana ihany anefa no afa-mibaiko ny orinasa ahafahana mitsongodia ny misy ilay finday nangalarina. Vokany: mahazo vahana tanteraka ny mpangalatra. Tranga ao Antananarivo amin'izao taona 2017 izao izany resahiko izany.
jentilisa 12 septambra 2017
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 151 152 153 Manaraka»